Fikaonandoha Hisianà Resaka Mivelatra kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2017 11:50 GMT
Noheveriko fa nandeha soa amantsara ny fivorian'ny Global Voices tamin'ity maraina ity. Ny ankamaroan'ny olona tao anaty efitra dia, mazava ho azy fa, Amerikana avokoa. Nanomboka niresaka ny fomba – araka ny famintinana voalohany nataon'i Ethan Zuckerman – iresahan'ny tontolom-bolongana Amerikana itsivitsy kokoa mikasika izao tontolo izao mitaha amin'ny ataon'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Ity misy sarintany nivoaka tamin'ny fikarohana nataon'i Ethan tamin'ny taona 2004. Ireo firenena miloko mena dia naseho tsara kokoa tao amin'ny tontolom-bolongana noho ny ao amin'ny vaovao Google (izay loharanom-baovao mahazatra indrindra tamin'ny taona 2004). Ireo firenena miloko manga, izay tsy dia tena voaresaka ao amin'ny tontolom-bolongana noho ny fampahalalam-baovao mahazatra. (FANAVAOZANA: manana lahatsoratra vaovao izay ahitana fikarohana bebe kokoa mikasika ity olana ity i Ethan.)
Fa maninona ny blaogera Amerikana no toa tsy mifandray be amin'ireo mpitoraka blaogy manerana ny tany? Nanome soso-kevitra ny olona tao amin'ny efitrano fa olana roa fototra no mahatonga izany: Ny voalohany dia satria tsy fantany hoe aiza no ahitana mpitoraka blaogy tsara avy amin'ny firenena hafa – raha tsy Instapundit na olona mifandrohy amin'izy ireo. Ny antony iray hafa kosa dia tsy ampy toejavatra na fahalalana mikasika ny zava-mitranga any amin'ny firenena vahiny mba hitorahana blaogy momba azy ireny ny olona.
Ny tetikasa Global Voices , miaraka amin'ny Index sy Aggregator-nay, dia miezaka ny hanome vahaolana ho an'ilay olana voalohany. Ilay olana iray hafa dia misy idiran'ny tsy fahampiana toejavatra. Ahoana no hampifandraisanao ny olona amin'ny lahatsoratra mikasika ny Armeniana sy Bahrain raha toa ka tsy mahafantatra ny toejavatra mahakasika ny zava-mitranga ao Armenia sy Bahrain ry zareo? Sarotra kokoa ity iray ity ary tsy ahitana vahaolana mazava. Hevitra iray izay nivoaka nandritra ilay fivoriana dia mba hahazoan'ireo blaogera mpanaraka bebe kokoa raha mitoraka blaogy ho an'ny mpamaky eran-tany dia ny manome rohy ao amin'ny tranonkalany izay ahafahan'ny olona mandray fahalalana bebe kokoa mikasika ny fireneny – ary vaovao vao haingana mikasika ny fireneny. Tokony hanao tsara ny asany ihany koa ny wiki an'ny GV amin'ny fanomezana ireo rohy mankamin'ny fampahalalam-baovao azo antoka.
Milaza i Dave Winer fa tena tiany ny hanampy amin'ny fandaminana ny ”fitetezana blaogy” ho anireo bilaogera sangany mba handeha amin'ny firenena maro isan-karazany ary hitatitra mikasika azy ireo avy amin'ny fomba fijeriny manokana. Mihevitra aho fa tsara izany. Mihevitra ihany koa aho fa raha toa ka manana fihaonana mivantana an'ireo blaogera sangany ireo, amin'ireo ao an-toerana any amin'ny firenena maro samihafa, hitarika fifandraisana amin'izy ireo matetika kokoa izany rehefa mandeha ny fotoana.